I-AutoCAD WS, eyona ilungileyo kwi-AutoDesk yewebhu-iGeofumadas
Ikhaya/AutoCAD-AutoDesk/I-AutoCAD WS, eyona nto ibhetele kwi-AutoDesk kwiwebhu
I-AutoCAD WS, eyona nto ibhetele kwi-AutoDesk kwiwebhu
I-AutoCAD i-WS ligama apho iprojekthi ye-Butterfly ifike khona, emva kwe-AutoDesk emva ezininzi iinzame ukuba ndize ndifune ukusebenzisana newebhu, ndafumana inkampani yakwa-Israyeli i-Sequoia-Backed, eyayisebenza i-PlanPlatform ukusebenzisana neefayili ze-dxf / dwg ngewebhu.
Enye yezona zicelo ze-AutoDesk ezithembisayo, ngakumbi ngenxa yokusetyenziswa kwezinto ezininzi ezinokuthi zibe nazo kwiinkqubo ezahlukeneyo zokusebenza kude kube ngoku zikhawulelwe yiWindows. Ngale nto, umsebenzisi weLinux uya kuba nakho ukujonga kunye nokuhlela ifayile ye-dwg, umsebenzisi we-Mac kunye neethoyi ezihambayo.
Kwiinyanga ezimbalwa ezedlule ikhutshwe ikhutshwe ngokukhuphela kwiSitolo se-App, evumela ukuqhuba i-AutoCAD WS kwi-iphone kunye Ipad tablet. Akukubi, ukuba sicinga ukuba isimahla, nangona amandla aso esisiseko kwaye ecotha kunohlobo lwewebhu esele inenkqubela phambili.
Makhe sibone ukuba zeziphi iimpawu ze-AutoCAD WS eneselula.
Bona iifayile dwg / dxf. Unokujonga iifayile ukuya kuthi ga kwiinguqulelo zika-2010, loo nto iyodwa ithatha ikhredithi. Ukuyisebenzisa kwi-Ipad kufuna ukuba neakhawunti, into eyothusayo kukuba ndabelana ngefayile kwakudala ukusukela oko yabizwa ngokuba yi-Butterfly, kwaye xa ungena ngegama lomsebenzisi / negama lokugqitha-Andizange ndikhumbule-Ndabona ukuba isekhona kunye nokubhala okwenziwe ngabanye.
Kukho imizekelo yokuhlola engayilanda:
Umzobo wokwenza umzobo
Umzekelo wendlela yokuhlala emadolobheni kunye nokubonakala kwe-geospatial
Uhlobo oluyisiseko Phantse ukuba le nguqulo yeselula iyintoni uhlengahlengiso, nangona amandla alo apha apha ngaphezu kwesixhobo se-intanethi.
Kwinqanaba lokwakha unokwenza umgca, ipolline, isangqa, umxube kunye nombhalo; konke okubandakanyeka ngokulula kodwa okulinganiselwe.
Kwinqanaba lokuhlela, ukuchukumisa into kusebenze ukuhamba, ukukala, ukujikeleza kunye nokucima imiyalelo.
Unokuthatha isilinganiselo kwaye uchaze ngefu, umxube, umgca we-freehand kunye nebhokisi yombhalo.
Ngokubhekiselele ekubonisweni, ngoku unokukhetha ezimbini, kunye nayo yonke imibala kunye nokubala ngwevu. Inguqulelo yewebhu ixhasa umbono kwi Kuluhlu, efana kwiphepha.
Inombala wepeyinti apho umntu ukhetha phakathi kwezinto ze-10, akukho mlawuli wamanqanaba okanye izitayela zomgca.
Inguqulelo yewebhu ihambele phambili ngakumbi, uninzi lwemiyalelo esisiseko yokwakha kunye nokuhlela (i-trim, i-offset, uluhlu, i-chamfer, njl. Kubandakanya ukulawulwa kwamanqanaba, izitayile zelayini, iindlela zokulinganisa kunye ne-snap.
Ukwaxhasa Maps Google umthwalo reference, endicinga ukuba ndikunike eninzi isakhono. Le download kunokwenziwa ngokukhetha i fomati, anokuba R14, 2000, 2004, 2007, 2010 okanye zip kunye iimbekiselo.
Oku kunokuqhutywa ngabasebenzisi beWindowsMobile ngayo nayiphi na ithebhulethi, ukuze basebenze kwi-Intanethi. Inguqulelo engaxhunyiwe kwi-intanethi iyalibaziseka, ubuncinci inguqulelo ye-Ipad, ke abasebenzisi beli litye le-rosette kuya kufuneka balinde ngomonde, kuba ingxaki eziswa yiAdobe neApple ayivumeli ipad ukuba isebenze - ingcolileyo
Yabelana Lo ngumcimbi onomtsalane, nangona ndicinga ukuba bambalwa esele benamava ngayo. I-Autodesk iqinisekisa ukuba une-encryption, ngokunokwenzeka uvula umnyango wentsebenzo ngaphandle koloyiko lokulahleka apha endleleni. Into ebangela umdla yenye yeetabhu ezibonisa ixesha, kunye notshintsho olwahlukileyo lwefayile.
Okwangoku, iDropbox sele idityanisiwe kuhlobo lweselfowuni, enye indlela elungileyo yokugcina ilifu. Akubuhlungu ukwazi kwi bhulogi, kuba zilapho zivakalisa iindaba.
Ukuze ulayishe iifayile, unokukwenza kwipulatifomu yewebhu, okanye kwi-AutoCAD ukufaka iplagin apho ungakwazi ukuvumelanisa nefowuni yeselula.
Ngokoluvo lwam, enye yezona zinto zibalaseleyo ndizibonileyo kwi-AutoDesk ezintsha zewebhu, nangona kungacaci kum okwangoku ukuba i-AutoDesk izakuhlawulisa ngesi sixhobo kwixesha elizayo, kwaye ngesiphi isiseko. Inyathelo elikhulu lokunxibelelana nelifu, kwaye isebenza ngakumbi kunemizamo ye-Bentley yangaphambili ngeProjekthi Wise WEL, nangona kulapho Uguqulelo lweNigigator Kuthatha i-disadvantage ukuba isengumthengi.
Yiya kwi-AutoCAD WS
Landa i-AutoCAD WS ye-Ipad
Icala ezilungileyo iPad
Iiapps zentsimi-AppStudio yeArcGIS